အကြမ်းဖက်ပြီး ပြဿနာဖြေရှင်းမှု လက်မခံကြောင်း အမေရိကန်ပြော — မြန်မာဌာန
Myo Yar Zar Kyaw
အမေရိကန်ကဘာဖြစ်ချင်တာလဲ... ဘာကိုငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းလဲ လူတွေဘလောက်သေကျေပျက်စီးရဦိးမှာလဲ... တောင်းဆိုသလောက်ဟိုကအီးတောင်လှည့်မပေါက်တာကို ဘာတဲ့ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းဖြေရှင်းလဲ
မိမိတို့ကိုယ်တိုင်တိုက်ယူမှ ရမယ့် အောင်ပွဲပါ ဘယ်နိုင်ငံကမှ အလကားကူညီပေးမှာ မဟုတ်ဘူး အမေရိကန်တို့လည်း တူတူပါပဲ တောင်းဆိုရုံနဲ့ ပြီးရင် ပြီးမြောက်တာ ကြာလှပါပြီ တောင်းဆိုနေတာ ဘယ်နှစ်ကြိမ်မြောက်ရှိနေပြီဆိုတာ သူတို့ကိုယ်တိုင်ပဲ မေ့နေတာများလား... နေ့တိုင်းလိုလို ပြည်သူတွေ အသက်အိုးအိမ် သေကျေပျက်စီးနေတာ ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းလို့ မြင်နေတုန်းပဲလား ဆိုတာ ???????
TTL, San Jose
We DO NOT need your agreement USA. As DASSK once said to your senior officials, Myanmar fellows know about our home affairs much more than anyone else just like the way you know your own home affairs.
အကြမ်းဖက်ပြီး ပြဿနာဖြေရှင်းမှု လက်မခံကြောင်း အမေရိကန်ပြော